Waa sidee nolosha magaalada Jönköping | Somaliska
Magaalada Jönköping waa 9-aad ee ugu weyn Sweden. Magaalada ayaa ku taala cirifka harta labaad ee ugu weyn Sweden ee Vättern. Jönköping ayaa ku taala centaralka labada magaalo stockholm iyo Göteborg, waxay ka tirsansantahay gobolka Småland waxay u dhowdahay caasimada Labaad ee Sweden Göteborg iyadoo u jirta 2 saac. Jönköping waxaa ku nool dad gaaraya 127.600 sanadka 2011. Magaalada Jönköping ayaa waxaa ku nool Soomaali aan yareen iyadoo ay maamulka magaalada ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen Soomaalida dagan. Hadaba waxaan mowduucaan ku eegeynaa sida ay tahay qeybaha kala duwan ee nolosha magaalada. Guryaha: Waqtiyadii hore ayay fududeyd in laga helo guryaha magaalada balse waqtiyadii dambe dadka ayaa ku soo batay iyadoo hada aysan jirin wax guri ah oo laga helayo xataa ay dhib badan tahay in uu guri kahelo nin haysta shaqo joogta ah . Qiimaha guryaha ayaa kala ah 1 qol oo u dhexeeya 2500-3000Kr halka 2-qol ay u dhexeeyaan 3000-4000kr. Waxbarashada: Magaalada Jönköping waxaa ku yaal dugsi sare iyo jamacado Sweden magac ku leh. SFIga ayaa la sugaa ilaa 1 bilood marka qofka uu cusubyahay waxaa laga dhigtaa laba iskool oo lakala yiraah Lenia AB iyo Abf . . Qaadashada Körkort ayaa la ii sheegay in ay ka Adagtahay magaalada Jönköping balse dadka waxay ka soo qataan magaalo noojrta 30 daqiiqo oo layiraah Värnamo. Soomaalida qaar ayaa ii sheegay in iskuulka SFIga laga mamnuucay in ay ku tukadaan balse dadaal badan aysamaysay jaliyada magaalada ay leedahay waxaa loo ogolaadey in ay ku dukanadaan sanadkan 2011. Shaqada: Soomaalida magaalada ku dhaqan ayaa ii sheegay in intooda badan ay shaqeeyaan helaana waqtiyo gaban iyo waqtiga abadiya iyada oo ay ku yaalaan warshahdao badan iyo baqaaro badan oo waliba xaga shaqada basaska waxaa u badan soomalia wada gadiidka basaska magaalada ka shaqeeya. Praktiga qasab kuma ahan dadka balse qofkii doonaya waxay u sahleysaa in uu shaqo ku helo. Sidoo kale Soomaalida ayaa waxay ka qeyb qaataan mashruucyo kala duwan iyadoo madaxka jaliyada Jönköping Somaliska förening oo ka mid ah dadka u shaqeeya bulshada ayaa waxaa uu ii sheegay in ay hada wadaan mashruuc xolo dhaqasho ah. Nolosha Guud iyo isku Socodka: Soomaalida Jönkköping ayaa waxay leeyihiin jaaliyad firfircoon oo si weyn ugu dadaasha arimaha mideynta qoysaska . iyo qabashada wacyigalin diini ah iyo mid maadi ah oo ay soo qaban qaabiso jaliyada magaalada waxaa dhacaya 20, 21 iyo 22 bishan Maj mutamarkii sadaxaad ee Jönköping. Magaalada ayaa waxaa ku yaala dukaamada ugu waaweyn ee Sweden ku yaala waxaa kaloo kuyaalo laba dukaan oo somalida leedahay . Waxay Sidoo kale Soomaalidu leeyihiin lokal jaaliyadu ay leedahay iyo goobo ay ku tukadaan. Xaga isku socodka ayaa magaalada waxaa ka shaqeeya basas . Sidoo kale Jönköping ayaa waxaa mara tareemo kala duwan oo isku xira magaalayooyinka waa wayn ee Sweden waxaana hoostaga magaalooyin yar yar sida Nässjö. Värnamo. Trånas iyo magalooyin kale. Magaalada Nässjö waxaa ku yaal tareen stationka uguwayn sweden marka laga reebo Stockholm. Waxaa soo diyaariyay Anwar Muhammed Hassan Warbixintani waa mid ka mid ah barnaamijkii aan ugu tala galnay in aan kaga warano nolosha kamuunada Sweden. Adiguna waxaad noo soo diri kartaa warbixin ku saabsan nolosha kamuunka aad ku nooshahay.
Magaalada Jönköping waa 9-aad ee ugu weyn Sweden. Magaalada ayaa ku taala cirifka harta labaad ee ugu weyn Sweden ee Vättern. Jönköping ayaa ku taala centaralka labada magaalo stockholm iyo Göteborg, waxay ka tirsansantahay gobolka Småland waxay u dhowdahay caasimada Labaad ee Sweden Göteborg iyadoo u jirta 2 saac. Jönköping waxaa ku nool dad gaaraya 127.600 sanadka 2011.
Magaalada Jönköping ayaa waxaa ku nool Soomaali aan yareen iyadoo ay maamulka magaalada ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen Soomaalida dagan. Hadaba waxaan mowduucaan ku eegeynaa sida ay tahay qeybaha kala duwan ee nolosha magaalada.
Guryaha: Waqtiyadii hore ayay fududeyd in laga helo guryaha magaalada balse waqtiyadii dambe dadka ayaa ku soo batay iyadoo hada aysan jirin wax guri ah oo laga helayo xataa ay dhib badan tahay in uu guri kahelo nin haysta shaqo joogta ah . Qiimaha guryaha ayaa kala ah 1 qol oo u dhexeeya 2500-3000Kr halka 2-qol ay u dhexeeyaan 3000-4000kr.
Waxbarashada: Magaalada Jönköping waxaa ku yaal dugsi sare iyo jamacado Sweden magac ku leh. SFIga ayaa la sugaa ilaa 1 bilood marka qofka uu cusubyahay waxaa laga dhigtaa laba iskool oo lakala yiraah Lenia AB iyo Abf . . Qaadashada Körkort ayaa la ii sheegay in ay ka Adagtahay magaalada Jönköping balse dadka waxay ka soo qataan magaalo noojrta 30 daqiiqo oo layiraah Värnamo. Soomaalida qaar ayaa ii sheegay in iskuulka SFIga laga mamnuucay in ay ku tukadaan balse dadaal badan aysamaysay jaliyada magaalada ay leedahay waxaa loo ogolaadey in ay ku dukanadaan sanadkan 2011.
Shaqada: Soomaalida magaalada ku dhaqan ayaa ii sheegay in intooda badan ay shaqeeyaan helaana waqtiyo gaban iyo waqtiga abadiya iyada oo ay ku yaalaan warshahdao badan iyo baqaaro badan oo waliba xaga shaqada basaska waxaa u badan soomalia wada gadiidka basaska magaalada ka shaqeeya. Praktiga qasab kuma ahan dadka balse qofkii doonaya waxay u sahleysaa in uu shaqo ku helo. Sidoo kale Soomaalida ayaa waxay ka qeyb qaataan mashruucyo kala duwan iyadoo madaxka jaliyada Jönköping Somaliska förening oo ka mid ah dadka u shaqeeya bulshada ayaa waxaa uu ii sheegay in ay hada wadaan mashruuc xolo dhaqasho ah.
Nolosha Guud iyo isku Socodka: Soomaalida Jönkköping ayaa waxay leeyihiin jaaliyad firfircoon oo si weyn ugu dadaasha arimaha mideynta qoysaska . iyo qabashada wacyigalin diini ah iyo mid maadi ah oo ay soo qaban qaabiso jaliyada magaalada waxaa dhacaya 20, 21 iyo 22 bishan Maj mutamarkii sadaxaad ee Jönköping. Magaalada ayaa waxaa ku yaala dukaamada ugu waaweyn ee Sweden ku yaala waxaa kaloo kuyaalo laba dukaan oo somalida leedahay . Waxay Sidoo kale Soomaalidu leeyihiin lokal jaaliyadu ay leedahay iyo goobo ay ku tukadaan.
Xaga isku socodka ayaa magaalada waxaa ka shaqeeya basas . Sidoo kale Jönköping ayaa waxaa mara tareemo kala duwan oo isku xira magaalayooyinka waa wayn ee Sweden waxaana hoostaga magaalooyin yar yar sida Nässjö. Värnamo. Trånas iyo magalooyin kale. Magaalada Nässjö waxaa ku yaal tareen stationka uguwayn sweden marka laga reebo Stockholm.
Waxaa soo diyaariyay Anwar Muhammed Hassan
Wasiirka Socdaalka oo loogu baaqay in uu iscasilo
anwarow maanta saa ujoogtay maanoo keentay praktik qasab ma,ahin xaa umada u lug gooyhee guniila iyo niil adigaa maa,umadaan ka celihaayo war jönköping yaala isku imaan
kkkkkk meeshan waxaa isku heysta qofka barnaamijka soo diyaariyey iyo qof ka mid ah dadka deegaanka oo ka cabanaya praktik inta aan barnaamij lasoo diyaarin waxaa haboon in wax walbo laga soo eego sida aay yihiin waxaan rajeynaa maamulka webka inaan goor dhaw usoo diro nolosha magaalada aan hada ku noolahay ee Norrköping insha Allaah waa hadii aan horey loosoo gudbin
May 16, 2011 at 10:00
Dalka waa mahadsantahay. Warbixintaan wiilka soo diyaariyay xitaa waxa uu ku nool yahay magaaladaas. Waan soo dhaweynayaa warbixinta ku saabsan nolosha Norrköping horey uma aanan soo qorin. marka waan kaa sugyaa insha Allah.